5 WWE Superstars akabata Mari muBhangi chibvumirano chakareba kwazvo - Wwe
5 WWE Superstars akabata Mari muBhangi chibvumirano chakareba kwazvo
# 3 Seth Rollins - 273 mazuva (WWE Mari muBhangi 2014)
Seth Rollins aive neimwe yeMari inozivikanwa kwazvo muBhangi mari-ins muWWE nhoroondo
Aimbove WWE World Heavyweight Champion Seth Rollins ane nharo akanyanya kuzivikanwa Mari mubhangi mari-muiyo WWE nhoroondo.
Nekudaro, iyo Dhizaini akamanikidzwa kumirira yakaringana nguva yakawanda asati aisa mari yake muMari muchibvumirano cheBank.
. @WWERollins yakagara iri MARI! #MITB #HappyBirthdaySeth pic.twitter.com/vLxTyntQeB
- WWE (@WWE) Chivabvu 28, 2018
Rollins akakunda Dolph Ziggler, Jack Swagger, Kofi Kingston, Rob Van Dam, naDean Ambrose kuhwina Mari mubhangi kondirakiti paWWE Mari muBank kubhadhara-maonero-muna 2014.
Seth Rollins akaseka kusevha mari muMari yake mubhangi kondirakiti kanoverengeka mukati menguva yake nebhegi. Nekudaro, haana kumbobvira akwevera zviri pamutemo mutambo paakavimbiswa WWE World Heavyweight Championship mukana.
Izvo zvese zvakachinja panguva yechiitiko chikuru cheWrestleMania 31 muna 2015. Brock Lesnar aidzivirira WWE World Heavyweight Championship kurwisa 2015 Royal Rumble anokunda, Roman Reigns, mune yakatarwa chiitiko chikuru cheshoo.
Vese Lesnar naReigns vaive pasi mumhete apo kamwe kamwe Seth Rollins 'mumhanzi wakarova, uye aimbove Shield nhengo akasvetukira kurin'i. Rollins akarongedza zviri pamutemo mari yake mubhangi reBank, achichinja chiitiko chikuru kuita katatu kutyisidzira kweWWE World Heavyweight Championship.
Seth Rollins ane HEIST YEMAZUVA
Makore mashanu apfuura nhasi, @WWERollins akava WWE Champion uye munhu wekutanga kuita mari mukondirakiti yake yeMari In The Bank kuWrestleMania
(kuburikidza @WWE ) pic.twitter.com/nFE8Q6F6j5
- B / R Kurwira (@BRWrestling) Kurume 29, 2020
Rollins akarova Reigns yeRoma necompb stomp uye akabudirira kutora iyo World Heavyweight Championship kekutanga mune rake basa. Izvi zvakaratidza kekutanga WWE Superstar ichiburitsa Mari mubhangi kondirakiti apo mutambo wemakwikwi waienderera.
Mushure mekubata Mari mubhanga chibvumirano chemazuva makumi matatu nemaviri, Seth Rollins akabudirira kutora WWE World Heavyweight Championship uye akapedza iyo 'heist yezana ramakore.'
KUMASHURE MBERI 3/5ZVINOTEVERA
muhukama hwakareba asi uine manzwiro kune mumwe munhu
sei kurega kuita godo muhukama hwangu
murume wangu haasi kudanana neni
zviratidzo zvekukwezvana pakati peshamwari
kubvuma mumwe munhu zvaari muhukama